Jwxo-shiil oo Warbixin Geeyey Caasmara, Caasimada Eritrea – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Warbixin Geeyey Caasmara, Caasimada Eritrea
Aug 16, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Jwxo-shiil, oo ay aad indhaha ugu hayaan sirdoonka dalalka reer galbeedku, ayaa waxaa uu geeyey dalka Eritariya warbixintii ugu dambaysay ee geeska Afrika, meesha ay warbixin siinayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya xubno ka socda Kaalinka 5aad, oo iyagu haatan u soo xayd xaytay sidii ay wax uga dhaadhicin lahaayeen Qurba joogta Qabowgu hayo ee cid walba u qabaanta.
Waxay muddo badan dadweynaha Somalida Ogadeeniya na weydiiynayeen meesha uu ku dambeeyey Mr.Jwxo-shiil, waxaanu in badan isku daynay in aanu helo meesha uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa, maadaama aan war laga haynin muddo 7 bilood ah, waxaa kaliya oo aanu ogaanay in uu ku dhuumaalaysanayo Gudaha Ogadeeniya. Shalay ayaanu war soo qoray ku saabsan in aan war laga haynin Jwxo-shiil, ka hore intii ayna CAYNTE wada hadal.
Hadaba, shalay ayuu kolkii ugu horeysay ka hadlay Ideecada VOA, isga oo bixiyey lacag dhan US $2000, si loo weydiiyo kaliya su,aalah uu raaliga ka yahay in uu ka Jawaabo, sida aanu warka ku helay waxaa uu kolkii hore la soo hadlay BBC-da. Waxaana uu ka codsaday BBC-da in la weydiiyo oo kaliya su,aalaha uu soo qorto BBC-da ayaa arintaasi gaashaanka ku dhufatay, diidayna in ay ka qaadato wax laaluush ah, waxaa kale oo ay BBC-du sheegtay in kolka ay waraysato isaga in ay waraysan doonto xubin ka socda Golaha Sare ee ururka ONLF. waana sidaas arinta ayna dad badani u maqal sababta oo ah waxaa kaliya oo uu doonayey oo ay ku qasbeen taageerayaalkiisu in uu Ideecada ka hadlo, kana hadal. Waxaase meesha ka baxday masuuliyadii uu sheeganayey, waayo masuulku waa in uu qanciyaa dadweynaha dhagaysanaya iyo waxa dhabta ah ee jira, taasina ma dhicin.
Jwxo-shiil, intiina ogg iyo inta aan ogaynba waxaa uu gurigiisa ka maqan yahay muddo labo sano ah, Afadiisuna waxay ugu tagaysay dalka Eritariya. Waxaa Eritariya laga siiyey Guri iyo Gaadhi,xero ciidan iyo Ideecad uu ka baahsado wararka uu jecel yahay. Xerada Ciidan iyo Ideecaduba waxay ka dhaxeeyaan Jwxo-shiil iyo xubno sare sare oo ka tirsan ururada xag jirka ah, waxaa uu Jwxo-shiil dalka Masar iyo Qadar kula kulmay xubno ka tirsan ururda xag jirka oo aan Somali ahayn. Waxaana arintan Ogaadey ciidanka Sirdoonka ee dalka Maraykanaka.
Ururka ONLF, oo intii ka horeysay September 2001, uu magaciisu ku qoraa urur argagixiso ah, oo ay Itobiyana aad ugu doodi jirtay, ayaa waxaa laga saaray bilowgii sanadkii 2002, ka dib kolkii ay ciidamada Maraykanku kobtiisa ugu tageen ciidanka ururka ONLF iyo dadaalo badan oo ay galeen xubno ururka ah. Intii xiligaasi ka dambaysay waxaa uu Maraykanku qalinka ku duugay in ururka ONLF, uusan ahayn ururada xag jirka ah, Itobiyana ay ku adkaatay in ay ka dhaadhiciso mar labaad in uu ururku yahay xag jir.
Hadaba, dhamaadkii sanadkii 2006, ayaa waxaa bilowday xidhiidho xoog leh oo dhex maray Jwxo-shiil kaligii iyo kooxo xag jir ah oo Ajnabi iyo Somaliba isugu jira, arintan iyada ah wax yar mooyaane kama ayna warhaynin xubnaha ururka ONLF. Arintan oo ay Ogaayeen Sirdoonka Maraykanka, ayaa waxaa ay si cad u soo baxday, ka dib kolkii ay dhacday Maxkamad lagu baadhayey tacadiyo loo gaystay dadweynaha Somalida Ogadeeniya [gumaadkii dadweynaha Ogadeeniya 2007/08]. Waxaa halkaas lagu soo bandhigay qoraalo iyo sawiro muujinaya in uu Jwxo-shiil xidhiidh adag la lee yahay ururo xag jira, laguna sifayn karo Jwxo-shiil in uu yahay xubnaha gacanta siiya ururada xag jirka ah, balse uusan ahayn ururka ONLF urur xag jir ah.
Tan iyo intii ay arimahani soo baxeen Jwxo-shiil hal mar ayuu dhuumaal ku yimid dalka Ingriiska, iska oo isla markiiba u gudbay dalka Jarmalka kana duulay, warbixina sir ah oo ay soo saartay hayada sirdoonka ee Maraykanaka, ayaa waxay si aan la shaacin u sheegtay in aad loo doonayo, su,aalana la doonayo in la waydiiyo kolka la arko. Sirdoonka Maraykanku waxaa ay isku dhabar jabiyeen in ay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay Jwxo-shiil, arintaas oo uu David Shinn uu ku qoray wargays isaga oo leh wax war ah lagama hayo Jwxo-shiil tan iyo bishii January 2009 in uu dhintay iyo in uu nool yahay. Arintani waxay daliil u tahay in aad loo doonayo si looga helo xogo lagu tuhunsan yahay.
Waxaa rajo yar laga qabaa in uu Jwxo-shiil ku soo dhiirado imaanshaha dalalka reer galbeedka, waxaana dhab ah in uu yahay nin si toos ah ugu shaqeeya sirdoonka Eritariya, meel kasta oo uu tagan waxaa uu warbixinta siiyaa xukuumada Eritariya. Waxaa kale oo jirta in ay xero ugu jiraan iyaga oo aan raali ka ahayn 60 nin oo ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya, oo aan rajo laga qabin in ay ka soo baxaan dalka Eritayiya.
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], waxay taageerayaalkeedu si xoog leh u joogaan dalalka reer galbeedka, hadaba maxaa keenay in Jwxo-shiil, inta uu Dubai yimaado uu u duula Caasmara, waxaa uu ku dhici la,a yahay in uu soo galao dalka uu haysto dhalashadiisa si uu ula hadlo taageerayaalkiisa. Waana mid aan rajo laga qabin in uu sidaasi yeelo, balse waxaa la garan la,a yahay in uu noloshiisa inta uga hadhay ku dhamaysan Caasmara iyo in kale.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xubno kula jiray arimaha xag jirnimada ah ee uu ku jiray Jwxo-shiil.
rasaas baa runta shegee rafiiqaaga ka yeelo
Qurbo Joogta Somalida Ogadeeniya oo Fayl ugu Jira Xeryaha Booliska dalalka Ingriiska iyo Sweden